थाहा खबर: नेपालमा लागुऔषध : गाँजा, कोकिनदेखि हेरोइनसम्म
काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपालमा लागुऔषधसहित दैनिक ६ जना पक्राउ पर्ने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७८।७९ को मंसीरसम्म मात्र देशभरबाट २ हजार २४६ जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरूबाट प्रहरीले आव ०७८।७९ को मंसीरसम्म विभिन्न लागुऔषध बरामद गरेको छ। प्रहरीले यो अवधिमा करिब २ हजार ९९८ केजी गाँजा बरामद गरेको छ।
यही आवको मंसीरसम्म ३१४ केजी चरेस, ३ केजी हेरोइन, ९ केजी अफिम र ४ केजी कोकिन बरामद गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। २०७७।७८ मा ८ हजार २३४ गाँजा बरामद गरिएको छ। ५११ केजी चरेस रहेको छ भने ९ केजी हेरोइन रहेको छ। यस्तै २२६ केजी अफिम रहेको छ।
यस्तै २०७६।७७ मा ४ हजार ३६७ केजी गाँजा बरामद गरिएको छ भने ५१९ केजी चरेस, हेरोइन ७ केजी‚ अफिम ४४ केजी र कोकिन १५ केजी बरामद गरिएको छ। यस्तै २०७५।७६ मा १० हजार ३५९ केजी गाँजा, २ हजार ६५९ केजी चरेस, ११ केजी हेरोइन र ३४ केजी अफिम बरामद गरिएको छ।​
देशैभर लागुऔषधको कारोबार
लागुऔषधको कारोबार देशैभर देखिएको छ तर सबैभन्दा बढी गाँजा बरामद मधेस प्रदेशबाट १ हजार ४३७ केजी गाँजा बरामद गरिएको छ। बागमती प्रदेशबाट चरेस १५१ केजी बरामद गरिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमै ७ केजी अफिम र ब्यूरोअन्तर्गत कोकिन ३ केजी बरामद भएको छ।
देशभर यो आर्थिक वर्षमा ट्याब्लेट ८९ हजार ८४१ थान बरामद गरेको छ। एम्पुल र कोरस करिब क्रमशः ७४ हजार ७३७ र ४ हजार ६८२ थान बरामद गरिएको छ भने अन्य ३ हजार ४६१ थान लागुऔषध बरामद गरिएको छ। प्रहरीले २ केजी पोल्याण्ड पनि बरामद गरेको छ।
चार वर्षको अवधिमा कति पक्राउ परे?
चालु आ.व.को मंसीरसम्म २ हजार २४६, आ.व. २०७७।७८ मा ४ हजार ६२६, आ.व. २०७६।७७ मा ४ हजार ५४६ र आ.व. २०७५।७६ मा ५ हजार ५५८ जना लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन्।
लागुऔषधसहित प्रहरीले पछिल्लो चार वर्षमा १६ हजार ९७६ जना पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेपाली, भारतीय र विदेशी नागरिक रहेका छन्। आ.व. २०७५\_७६ देखि चालु आ.व.को मंसीरसम्म कुल १५ हजार ७०० नेपाली पुरुष लागुऔषधसहित पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा छ।
यस्तै चार वर्षमा ७१६ जना महिला पक्राउ परेका छन्। लागुऔषधसहित भारतीय पुरुष र महिला गरी कुल ५१४ जना प्रहरी फन्दामा परेका छन्। यस कार्यमा अन्य देशका ४५ जना रहेका छन्।